SXSW २०१ Inte अन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिक र्‍यापअप | Martech Zone
SXSW २०१ Inte अन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिक र्‍यापअप
मंगलवार, मार्च 18, 2014 बिहीबार, जुन 18, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
हाम्रो पार्टनर मेल्टवाटरको बारेमा एक राम्रा चीजहरू सामाजिक मिडिया निगरानी सफ्टवेयर त्यो हो कि तपाइँ विषयहरु र घटनाहरु राम्रो संग अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ भावना र लोकप्रियताको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न। यो वर्ष, तिनीहरूले सुरु गरे SXSW वरिपरि बज निगरानी गर्दै फेब्रुअरी २ on मा र केहि चाखलाग्दो प्रवृत्ति फेला पर्यो:
NSA whistleblower, एडवर्ड स्नोडेन एक ठूलो सम्झौता थियो। सबै सामाजिक बजको%% स्नोडेन सम्बन्धित थियो।
पुरुषले सामाजिकमा अधिक धेरै पोष्ट गरे: %२% बनाम 62 38% महिलाको लागि।
जस्टिन बीबरसँग ग्रम्पि बिरालो भन्दा %००% बढी उल्लेख थियो! (भन्नुहोस् वाहा?)
सबै कूल तथ्या .्कहरूको लागि, तल इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्। र हाम्रो प्रायोजक मेल्टवाटर जाँच गर्न नबिर्सनुहोस् उद्यमहरूको लागि सामाजिक मिडिया निगरानी उपकरण.
टेक्नोलोजीले मार्केटिंगको भविष्य कसरी आकार दिन्छ
२०१ For को लागि एक इनबाउन्ड वेबसाइट सिर्जना गर्दै
मार्स 18, 2014 मा 11: 55 एएम
नयाँ संगीत वा नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा धेरै छैन। म SXSW २०१ of को दु: खी घटना (lives जनाको हराएको) को कुनै उल्लेख देख्दिन। धेरै बताउँदै।
मार्क्स 18, 2014 मा 3: 11 PM
हे जोन - राम्रो प्रश्नहरू। मैले यो इन्फोग्राफिक उत्पादन गरें, त्यसैले म जवाफ दिनेछु: हामीले सम्मेलनको अन्तर्क्रियात्मक भागलाई विशेष रूपमा अनुगमन गर्‍यौं, जुन मार्च -7-११ सम्म चलेको थियो। त्यसो भए, यो मार्च १२ मा भएको भयानक दुर्घटनाको उल्लेख गर्दैन। हामी सहमत छौं कि यो चाखलाग्दो कुरा हो कि नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा यस अवधिमा कुनै कुराकानी नभएको थियो। र, जो कुनै व्यक्ति रातो नदीमा भएको त्यो डरलाग्दो त्रासदी भन्दा २ दिन अघि, मेरो मुटु यसबाट प्रभावित सबैलाई जान्छ।